Heerkulka ugu hooseeya ee abid laga diiwaan geliyo dhulka | Saadaasha Shabakadda
David melguizo | | Kala bixid, Qalabka Saadaasha hawada
Antarctica, waa qaaradda ugu qabow meeraha
Sannad kasta, marka qaboobaha yimaado, waxaa jira dad ku raaxeysta xilliga qaboobaha, barafka, laakiin waxaa jira kuwa kale oo la silca oo ka cabanaya heerkulka hooseeya. Hal xal ayaa ah inaad naftaada u qalbi qaboojiso adigoo u maleynaya inay jiraan meelo kale oo heerkulku yahay mid aan dhammaad lahayn.
Meesha ugu qabow ee sida joogtada ah loogu noolaado dhulka waa Woqooyi-bari Siberia, halkaasoo heerkulka magaalooyinka Verkhoyansk iyo Oimekon uu hoos ugu dhacay 67,8 ºC oo ka hooseeya eber 1892 iyo 1933 siday u kala horreeyaan. Ilaa iyo daraasadihii ugu dambeeyay ee la sameeyay, diiwaanka wuxuu ahaa 89,2 ° C oo ka hooseeya eber, oo ka diiwaan gashan saldhigga sayniska Ruushka ee Vostok ee Antarctica tan 1983.
Laakiin hadda, waa maxay meesha ugu qabow dhulka? Meesha ugu qabow dusha sare ee meeraha waxay ku taal buuraha Antarctic ee bariga Antarctic plateau halkaas oo heerkulku gaari karo qiyam ka hooseeya 92ºC oo ka hooseeya eber habeen qabow oo cad.
Koox saynisyahanno ah ayaa ku ogaadey meeshan iyagoo falanqeynaya khariidadaha heerkulka dusha sare ee adduunka ee ugu faahfaahsan ee la helay illaa maanta, oo lagu soo saaray xog laga helay dayax gacmeedyo fog oo fog sida Landsat 8 (oo ka tirsan NASA iyo USGS)
Cilmi baarayaashu waxay falanqeeyeen xog laga helay dayax gacmeedyo kala duwan muddo 32 sano ah. Waxay ogaadeen in daraasiin xaalado ah diiwaanka heerkulka ugu qabow uu ku yaalay meelo taxane ah oo u dhexeeya safafka buuraha Antarctic, oo ah laba buurood oo ku yaal halka loo yaqaan 'Plateau' Antarctic Plateau '. Rikoodhka cusub ayaa la gaadhay Agoosto 10, 2010, isagoo gaadhay qiyamka 93,2 ºC oo ka hooseeya eber.
Horey ayaa looga shakiyay in buurtan Antarctic ay gaari karto heerkul ka hooseeya kuwa Vostok jooggeeda awgood, laakiin ugu dambayntii waxay ahayd, mahadnaqa dareeraha Landsat 8, inay suurtagal ahayd in si faahfaahsan loo barto aaggan lana go'aamiyo qiimaheeda
Wadada loo maro jawaabta su'aasha, waa maxay heerkulka ugu qabow ee lagu gaari karo dhulka iyo sababta? Waxay bilaabatay markii cilmi baarayaasha qaar ay baranayeen barakicinta barafka waaweyn ee buuraha bariga Antarctic plateau. Markii saynisyahannadu ay kordhiyeen faahfaahinta, waxay arkeen dildilaaca dusha sare ee barafka inta u dhexeysa dunta, oo laga yaabo in la abuuray markii heerkulku hoos u dhacay oo lakabka sare ee barafku liqay.
Aaggan durba waxaa ka jira heer kul aad u daran oo xitaa ka sii daraya markii cirku caddaado. Hadday cirku faaruqdo dhawr maalmood, heerkulka dhulku wuu sii sii dhacayaa, taasoo u oggolaanaysa kuleylka haray inuu baxsado. Sidan oo kale, lakab hawo aad u qabow leh ayaa lagu sameeyaa barafka iyo barafka, oo ka cufan hawada sare, oo ka soo degta dhaadhaca buuraha safka ah ee ku teedsan bariga Antartik iyo soo galka meelaha barafka heerkulku xitaa wuu sii yaraadaa.
Baarayaasha ayaa sheegay in hadii hawadu sii ahaato mudo dheer, kuleylka haray ay sii socdaan in la shucaacayo, iyadoo sidan loo gaarayo diiwaanka qabowga adduunka. Markii hore waxaa loo maleynayay in heerkulkan diiwaangashan laga heli doono aagag aad u gaar ah, wuxuu muujinayaa Scambos (hogaamiyaha mashruuca), laakiin waxaa la ogaaday in, taa lidkeeda, lagu arkay dhul ballaaran oo dherer sare leh oo Antarctic ah.
Macluumaad dheeraad ah: Gobolka Siberia Altai wuxuu diiwaangaliyay heerkulka ugu sareeya 170 sano, Xuddunta barafka ugu da'da weyn adduunka ayaa laga helay Antarctica, Saynisyahano Ruush ah ayaa ku soo warramay in ay gaareen harada Vostok 2 mayl hoostooda barafka Antarctic
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Kala bixid » Heerkulka ugu hooseeya ee abid laga diiwaan geliyo dhulka